Al-shabaab oo xoog ku kaxaystay 70 Oday – Madal Furan
Hoy > Warka > Al-shabaab oo xoog ku kaxaystay 70 Oday
Al-shabaab oo xoog ku kaxaystay 70 Oday
Kismaayo (Madal Furan) – Deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf uu sheegay in ururka Al-shabaab ay subaxnimadii hore ee saaka ay ka afduubteen 70 ka mid ah Oday, wuxuuna arrintan ku soo daray khudbadii uu ka jeediyey shirka Golaha Iskaashiga Maamulada Soomaaliya isagoo sharaxaya dhibaatada ay ururka Al-shabaab ku hayaan deegaanka uu ka taliyo ee Galmudug.
Arrintaas ayuu ku eedeeyey Dowladda Federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay inay wax ka qabato wuxuuna ku eedeeyey inay ku mashquulsan yihiin sidii ay u wiiqi lahaayeen nidaamka Maamuladda Goboladda ka jir.
Dowlada Soomaaliya ayuu sheegay inay ku filneyn amniga dalka isla markaasna aysan muujin wax masuuliyad ahi inay ka saran tahay.
Deegaano ka tirsan goboladda Galmudug ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa laga dareemayey dagaalo u dhexeeya dadka shicibka ah iyo ururka Al-shabaab, balse ay Al-shabaabku ka awood roonaadeen dadkii dagaalka kala horyimid.
Talaabada ayUrurka Al-shabaab ugu geyteen af-duubka ayaa la rumeysan yahay inay salka ku hayso kadib markii ay Odayaasha deegaamadaasi ay u hogaansami waayeen amarada ururka Al-shabaab ay xiliyada qaarkood ku soo rogaan dhulkaas.
Deg Deg:-Suldaan lagu dilay magaalada Badhan iyadoo uu madaxweyne Gaas booaqanayo gobolkaas
Sawiro: – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo la hadlay banaan baxayaasha Muqdisho.